Semalt Expert Anotsanangura Nzira Yokudzivirira Sei Computer Yako Kubva Botnets
Nik Chaykovskiy, the Semalt Mutevedzeri weMutengi weVatengi, anotaura kuti spam emails ave chinhu chakanaka kumushandisi wese we internet. Vakawanda vevashandisi veIndaneti vanogamuchira dzakawanda spam emails zuva rega rega zvinowanzowana faira re spam. Vongai nemafuta e-spam emazuva ano, vashandisi vanogona kubvisa zvakanyanya zve spam emails. Mumwe angave achishamisika pamusoro pechikonzero uye chinangwa chemashure eema spam emails. Muzviitiko zvakawanda, idzi emaimeri dzinobva pabhodeni. Botnets ndeimwe yekutyisidzira kwakaipisisa kune yekuchengetedzwa kwekushandura - planning du personnel excel gratuit. Mune nguva ichangopfuura, FBI yakataura kuti muU.S., makombiyuta makumi mapfumbamwe nemasere akabatwa nevanokuvadza imwe neimwe yechipiri.
Bhokete rine mabhuku akawanda e 'zombie makombiyuta,' ayo ari pasi pekutonga kweanorwisa, kazhinji pasina chiziviso chomwene. Anoshungurudza anoita bot uye anotumira kune aya makombiyuta. Kubva pano, vanogona kutumira murairo uye kudzora zviratidzo zveC & C kubva kune sevha. Ikombiyuta inotapukirwa neiyo malware haisisiri pasi pemirairo yomuridzi. Uyu anorwisa anogona kuita zvino murairo wakafanana neDDoS kurwisa pane imwe nzvimbo yewebhu. Iyo bhoti inoumba basa rinoshanda rebhokisi. Kubva pakunyora purogiramu iyi, anorwisa anoshandisa chigodo chitsvuku
C & C kubhota: Iyi nzira inosanganisira kutumira mirayiridzo kumatare emabhodzi uye kuigamuchira zvakananga kune sevha. Icho chimiro chekutaurirana.
Edza kuongorora. Bho rinogona kutaura zvakananga neimwe bot. Iyi inoumba nzira yakananga yokutumira mirayiridzo uye kugamuchira mhinduro. Mune nzira iyi, bot-master anogona kutora botnet yose.
Hybrid: Iyi nzira inobatanidza nzira mbiri dzinotsanangurwa pamusoro.
Paunotanga botnet yakabudirira, anorwisa anogona kuita maitiro e-crime sembavha yako data. Ruzivo rwemunhu ega seamamerica nemapepwords mabhesi anogona kukwira nenzira idzi. Kazhinji, kubhadhi kadhi rechikwereti, pamwe nekurasikirwa kwemasipiwedi, zvinoitika kuburikidza nekutema mabhodeni. Vashandi vanochengetedza dambudziko rakajeka sekutumira mazita, ruzivo rwezvemari pamwe nehutano hwekubhadhara ruzivo rwekutsvaga kurwiswa nevanokuvadza.